AMISOM oo siineyso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya tababar ku aaddan kobcinta haweenka ku jira qaybta amniga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta AMISOM oo siineyso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya tababar ku aaddan kobcinta haweenka...
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxaa ay siminaar labo maalmood socon doona u qaban-qaabisay xubnaha ka tirsan Ciidamada Ammaanka ee Soomaaliya kaas oo ku aaddan sida loo kobcin lahaa haweenka lana taageerro ku darista haweenka arrimaha goobta shaqada.
Tababarka la siinayo ugu yaraan 32 shakshi oo ka mid ah shaqaalaha qaybta amniga oo ka kala socda Dowladda Federaalka ah iyo xubnaha federaalka ayaa waxaa gacan ka geysanaya Safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya.
Danjire Francisco Caetano Madeira oo ah Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee u fadhiya Soomaaliya ayaa xilli uu furayay siminaarka ka dhacaya caasimadda sheegay in tababarka uu waafajin doono ciidamada ammaanka ee Soomaaliya qaab-dhismeedyada ka jira caalamka iyo gobolka oo ay dhiseen Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.
“Qaraarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee caddadkiisu yahay 2372 ee (ku darista) waajibaadka cusub ee AMISOM, waxaa uu xoogga saaraya dhowrista isla-xisaabtanka, in la helo ciidamo amni oo lala xisaabtami karo kuwaas oo u hooggaansan waajibaadyada caalamiga, gaar ahaan dhinaca Xeerka Caalamiga ah ee Bani’aaddinimada iyo Xeerka Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha. Ilaalinta haweenka iyo sinnaanta jinsiga waa muhiim,” ayuu hadalkiisa ku yiri Danjire Madeira.
Tababarka oo laga bilaabi doono maamul goboleedyada waxaa uu qayb ka yahay mashruuca AMISOM ee karti dhisidda jinsiga ee loogu talagalay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
Mudane Jim Haggerty, oo ah Madaxa Barnaamijka Sanduuqa Colaadda, Amniga iyo Xasilloonida ee Soomaaliya iyo La Taliyaha Xasilinta ee Safaaradda Ingiriiska, ayaa ballanqaaday in ay sii wadayaan taageeridda mashruuca.
“Inta aan awoodno, waan sii wadeynaa in aan taageerno u fidinno barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo ka soo farcama bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba,” ayuu yiri.
Ku xigeenka Wasiirka Difaaca ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Colaad Cabdullaahi Rooble, ayaa aqoonsaday muhiimadda ay leedahay in haweenka la siiyo fursado siman, gaar ahaan dhinaca jegooyinka go’aan gaaridda.
“Haddii aysan jirin xuquuqda haweenka, marka ma jirto xuquuqda bani’aaddanka. Haddii aan dhowrno xuquuqda haweenka, waa markaas marka aan dhihi karno waxaan dhowrnay xuquuqda bani’aaddamka,” ayuu ku yiri ka qayb-galayaasha siminaarka.
“Waa sidaasi darteed ayay muhiim inoogu tahay in aan soo baxno oo aan horumarinno xuquuqda haweenka.”
Previous articleMadaxweynihii Zimbabwi Robert Mugabe oo iscasilay
Next articleWasaaradda Amniga oo faahfaahisay muhiimadda xeerka la dagaalanka Argagaxisada